Taliyeyaal iyo 12 Askari oo loo xiray Kiiska dilkii ka dhacay degmada Xamar Weyne |
Taliyeyaal iyo 12 Askari oo loo xiray Kiiska dilkii ka dhacay degmada Xamar Weyne
Muqdisho (estvlive) 01/10/2017
Wasiirka wasaarada amniga gudaha Maxamed Abuurkar Isloow oo warbaahinta kula hadlay xarunta Jen Kaaye, ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyay halka uu marayo baaritaanka falkii dilka ahaa ee todobaadkii hore ka dhacay degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir.
Waxaa uu sheegay in baaritaanka arintan ku saabsan oo ay iska kaashanayaan wasaarada Amniga gudaha iyo taliska booliiska Soomaaliyeed wali socdo islamarkaana gacanta lagu hayo sida uu sheegay gaari looga shakisan yahay in uu qeyb ka ahaa falkaasi dilka ah.
‘’Waxaan ilaa iyo hadda heynaa cadeymo horudhac ah oo fududeynaya in la helo natiijo rasmi ah, marka uu baaritaanka gaariga hadda gacanta lagu hayo soo dhamaado waan soo gudbin doonnaa’’ ayuu yiri wasiirka Amniga gudaha.
Dhinaca kale, wasiirka ayaa sheegay in xiray taliyeyaashii nabad-sugida iyo booliiska degmada Xamar weyne islamarkaana xilka laga qaaday, sidoo kalana xabsiga la dhigay ilaa 12 Askari oo waqtiga uu falka dilka ah dhacayay ku sugnaa Labo Isgoys oo ka mid ah uu weerarku ka dhacay.
“Taliyeyaasha Booliska iyo Nabadsugida ee degmada Xamar Weyne xabsiga ayaa la dhigay, xilalkana waa laga qaadaty, sidoo kale waxaa xabsiga la dhigay 12 askari oo ku kala qornaa labo isgoys oo midna weerarka ka dhacay, midna ku dhowaa,”ayuu yiri Wasiirka Amniga.
Dilka todobaadkii hore ka dhacay degmada Xamar Weyne ayaa abuuray hadal heyn badan iyo shaki ku saabsan sugida Amniga caasimada, madaama halka lagu toogtay xoghayihii Ururka hwaeenka Qaranka iyo wiilka guddoomiyaha Ururka haweenka ay ka Agdhawaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya.